साइत मिलेका बिरामी ।
साइतका बिरामी ।
आजसम्म बिहान उठेर नित्य कर्मस्थलमा जान मन नलाग्ने दिनहरु धेरै भए । बिरक्त लाग्दा दिनहरु । मन भए पनि नभएपनि जानु त छ नै । त्यही मानिसहरुको भिडमा । यो कुनै हाट बजारमा लाग्ने भिड भने हैन । मेला पनि हैन । यो सबै दुखी मनहरुको भिड हो । नेपाल भरीका पीडित शरीर र मनहरुको केन्द्रबिन्दु । शरीर थला परेपछि मात्रै पुगिने ठाउँ । जीवनमा कहिल्यै जान नपरे भाग्यमानी भइने ठाउँ । त्यो हो अस्पताल एमर्जेन्सी । सबैका निम्ती आफ्नै बिरामी एमर्जेन्सी । दुई चार दिन एमर्जेन्सी कक्षको बास प्राय् ९० प्रतिशत बिरामीका कथा होलान् ।
भर्ना हुन कुर्नुपर्ने हुँदा कतिजना हार खाने ठाउँ । कति यस्तै रहेछ भनेर पचाउने ठाउँ । कतिजना कहिले रहेछ भर्ना गर्ने भनेर अचम्मित पर्ने ठाउँ । कति एक दिन त पालो अाउला भन्दै आश गर्ने ठाउँ । कति बाठाजनहरु गोरु बेचेको नातो लगाएर भन्सुनको प्रयास गर्ने ठाउँ । कतिजना सेतो कोट लगाएका सबैलाई झन्झट नै लाग्ने गरी भर्ना कहिले भन्दै सोध्ने ठाउँ । सबैजनाको एउटै उत्तर “ बेड खाली भएपछि ” । त्यतिन्जेल सम्म एउटै बेड्मा तीनजना मिलेर बस्नुपर्ने बाध्यता । “ गार्हो भयो डाक्साप । तीनजना एकै ठाउँमा । भर्ना गर्दिनु न । “ “ कस्सो चार जना हुनुभएनछ । आज प्रयास गर्छु । बचन भने दिन सक्दिन । उपचार चाँही यँहीबाट सुरु भैसक्यो । “ सबैलाई एउटै उत्तर । कति रुखो उत्तर मान्दा हुन् मनमनै ।
“ यो कता बुझाउने ? “ “ खुन तान्यो पाइपले निकल्दिनु न सिस्टर” “ भिडियोको डाक्ट्र कता जानुभयो .” “ यो रगत तान्दिनु न “ आदी अनगिन्ती प्रश्नहरुको चपेटामा हरेक दिन । रिसेप्सनको कर्मचारीजस्तो । उत्तर दिनु आफ्नो एउटा बिरामीमा केन्द्रित ध्यान भंग । नदिनु कसरी नदिनु । सबैलाई नयाँ परिबेश न हो । अत्तालिएका मनहरुले सेतो कोटलाई त सोध्ने भए ! त्यसैले एक दिन त सेतो कोट नलगाइ नै काम गरेँ ।
एक हप्ता भइसकेछ । औंलामा गिन्ती वार्डको खाली बेडहरुको संख्या आएको । मुस्किलले एउटा दुइटा बेड । आज त अलिक धेरै खाली बेड आए दुई चार जना दुखी आत्माहरुलाई केही खुशी बनाउन सक्ने आश थियो । तर आज पनि उस्तै । दिनभरिको आज प्रयास गर्दिन्छु भन्ने कुरा पुन: फ्लप । मुख देखाउन लाज लागेर घर जान हतारो लाग्ने । फेरि अर्को दिन उस्तै दिनचर्या । भर्ना नगरिदिने मानवता हराएको डाक्टरको दिनचर्या ।
एकाबिहानै एउटा खुशीको खबर आयो । “ एउटा आइ सि यु बेड खाली भयो । भर्ना गर्दा हुन्छ । “ त्यो खुशीको खबर कसैको प्राणपखेरु उडेर र घरपरिवारमा आँसुले स्थान लिएर आएको थियो । के गर्नु? सबैको नजरमा मानवता हराएको डाक्टर जाती परियो ! ! कतैको दु:खले कतै मुस्कान छरिएला भन्ने आश । सोही समयमा एक जना बिरामी नेपालगन्जबाट रेफर गरी अाइपुगेका थिए । आधा घण्टाभन्दा बढी भएको थिएन ।
सो बिरामीको प्रेसर कम भएको र इन्फेक्सन शरीरभरी फैलिएको हुनाले अाइ सि युको लागि उपयुक्त “ क्यान्डिडेट “ थिए । उनको भर्ना केही समयमा नै भयो । मुस्किलले पाइने अाइ सि यु खाली हुन पुग्नु र सोही समयमा अाइपुग्नु सन्जोग परेको थियो । उनको भर्नापस्चात ३ जना उस्तै उपयुक्त ”क्यान्डिडेट ” अाइपुगे । मेरा मनमा भने “ बिचराहरुको साइत मिलेनछ । “ भनेर भाग्यवादले जन्म लियो । उनीहरुका लागि अर्को दिनसम्म पनि बेड मिलेन । समयमै उपयुक्त उपचार गराउन बाहिर जाने उपाय भनिएपनि आशले हो कि खर्चको पवन्दिले हो कोही पनि गएनन् ।
सबैजना एमर्जेन्सिमा आफ्ना जीवनका कथा बुन्न थाले । पर्खाइ, अनिँदा रात ,दौडधुपको शारीरिक थकान तथा हतास मनका कथा । सानो छँदा हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो ” बाबु । साइत मिलाएर हिंड्नुपर्छ । घडी पला बार दिन आदि । चन्द्रमा दाहिने पार्न पर्छ । “ के गर्नु? रोग पनि साइतमा लाग्नुपर्ने रहेछ ,हजुरबुवा ।
दु:ख परेर आएका बिरामी । कसैले त हेर्दियोस् भन्ने चाहना र आवश्यकता पनि । तर खाली भने कोही पनि हुँदैनन् । सबै आ आफ्ना काममा ब्यस्त । सबै बिरामीलाई आफ्नै बिरामी मात्रै बिरामी । हुन त स्वाभाबिक पनि हो । मनुश्यको मन अचेल अर्को मनुश्यलाई प्रयोग गरेर आफुलाई चाहिने कुरा प्राप्त गरेर खुशी हुने संस्कारमा हुर्केको छ । वास्तवमा त प्रकृतिको बस्तुहरु प्रयोग गरेर मनुश्य खुशी हुनुपर्ने । “ एक घण्टा भैसक्यो । औषधी दिन आउनुभएन । रगत जाँच गर्ने भनेको रगत अहिलेसम्म नतान्दिने । “ आदि आत्मकेन्द्रित समस्याहरुको साङ्लो सबैजनाको हुन्छ ।
प्रथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ डाक्टर र सिस्टरको । त्यसमाथि कोही बिरामी आफन्तीको पेलेरै कुरा गर्ने प्रब्रित्ती नौलो होइन । पिट्न सम्म पछि नपर्ने रवाफ हुन्छ । तर केही दिन एमर्जेन्सीको बातावरणले आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ शायद थोरै बिरामीमा । “बिचरा डाक्तर र नर्स दुबैलाई गार्हो रहेछ ।” तेस्रो दिनमा स्वर नम्र हुन्छ उनिहरुको । दया र करुणा पलाउँछ होला । सबै किसिमका रोगको बिरामीसँगको संगत हुने त्यस्तो बैतरणिजस्तो ठाउँ । । सधैं जोखिममा रहेपनि न कुनै सुबिधा न कुनै सम्मान । तर सबैलाई लाग्ने ” मानवता हराएका डाक्टर तथा नर्सहरु । “ धेरैका आशा अनुरुप सेवा गर्न नसक्ने । भनेको बेला सलामी पानी नचडाइदिने ............. । शायद हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै कतै चुकेको छ । ठूलाबडाले अबमुल्यन गरेको पेशा न हो हाम्रो ! !
धनले माया गरेकाहरु सामान्य उपचारपस्चात बेड खोज्न प्राइभेट पनि जान तयार हुन्छन् । धनलाई माया गर्नुपर्नेहरुको खल्तिमा बेरिएर बसेका नोटहरु एक पछि अर्को निस्किँदा हरेक पटक मुटु काँप्छ । नोट सकिन्छ तर जाँच सकिन्न । बिचरा धनको पोको हेरेर रोग लागेको भए पो ! अन्तिममा हार खाएका अनुहार एउटा जिवित आत्मा भगवान भरोशा फिर्ता गर्न वाध्य हुन्छन् । मानवता नभएका हामी डाक्तर र नर्स पनि एउटा दु:खदशा दर्शनबाट मुक्ति पाउँछौ । धनलाई माया गर्नेहरु भने बेड खाली हुन्छ कि भन्ने आशले बसिरहन्छन् । बाहिर प्राइभेट अस्पतालका अाइ सि यु नजाने अठोट गर्छन् । जीवनसँग जुवा खेल्छन् । साइत चाँही तिनै धनलाई माया गर्नुपर्नेहरु र धनलाई माया गर्नेहरुलाई चाहिने रहेछ ।
भर्ना नगर्ने डाक्टर ।